मनोविज्ञानी, एक घरेलू noir शीर्षक जुन तपाईं अन्त सम्म टाई राख्नुहुन्छ वर्तमान साहित्य
पुस्तक मनोवैज्ञानिक (२०२० मा स्पेनिशमा प्रकाशित) नर्वेलीय अनुसन्धानकर्ता र मनोवैज्ञानिक हेलेन फ्लडको उपन्यास हो। हिंसा र पोस्ट-ट्राउमेटिक तनावमा उनको अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त लेखक, यो सिर्जना गर्न उनको चिकित्सकको रूपमा अनुभव प्रयोग गर्‍यो। घरेलू कालो नर्डिक
तपाईंको नामले सly्केत गर्दछ, चिकित्सक नर्वेजियनमा ओरिवल नाम एक छ रोमाञ्चक मनोवैज्ञानिक जहाँ धोखा एक स्थिर तत्व हो। वास्तवमा, पाठले धेरै व्यसनात्मक प्लट समावेश गर्दछ जसले सबैलाई झुठो छ भनेर भावुक (र स्पष्ट समयमा,) व्यक्त गर्दछ। यस कारणका लागि, कथाको नायकले कसैलाई विश्वास गर्न सक्दैन ... आफ्नै आफ्नै सम्झनाहरुमा पनि
1 लेखक को बारेमा
1.1.1 खैर, घरेलु नाईर भनेको के हो?
2 तर्क र मनोवैज्ञानिकको सारांश
2.2.1 सम्झनाहरु द्वारा बौलाहा
3 मनोवैज्ञानिकको विश्लेषण
3.2.1 त्यो वास्तविक हो?
3.2.2 एक कथा धागा को रूप मा झूट
हेलेन फ्लड अकवाग (नर्वे, १ 1982 XNUMX२) ओस्लो विश्वविद्यालयबाट मनोविज्ञानमा स्नातक गरेकी छिन्। अहिले हिंसा र आघातिक तनाव मा नर्वेजियन ज्ञान केन्द्र मा वरिष्ठ शोधकर्ताको रूपमा सेवा गर्दछ (NKVTS)
माथि उल्लिखित वैज्ञानिक संस्थामा, उनले आफ्नो डाक्टरल थीसिस पूरा गरे, जसले हिंसाका परिणामहरू पुनः पीडित र पोस्ट-ट्राउमेटिक अपराधको विश्लेषण गर्दछ। यी विषयवस्तुहरू पुस्तकको विकासमा स्पष्ट रूपमा वर्णन गरिएको छ मनोवैज्ञानिक, जसको विकासले मानव स्मृतिको कार्य र नाजुकता प्रदर्शन गर्दछ।
उनको धेरै लेखहरु र वैज्ञानिक प्रकाशनहरु बाहेक, हेलेन फ्लड छ उनको श्रेयमा दुई साहित्यिक विमोचन अघि मनोवैज्ञानिक। यी युवा उपन्यास हुन् हौदीनीको साथ लिफ्ट (2008) र लोकप्रिय विज्ञान पाठ नमस्ते, लाज (2018)। अब, कुनै श doubt्का बिना, को सफलता चिकित्सक अपराध कथाको लेखकको रूपमा एक आशाजनक भविष्यवाणी गर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै, को विकास मनोवैज्ञानिक आलोचकहरु लाई तुलना गरीएको छ अन्य बेच्ने शीर्षक बाट घरेलु नाई। उनीहरु मध्ये, Perdida (२०१२) गिलियन फ्लान द्वारा, मौन पत्नी (२०१)) एएसए ह्यारिसन र द्वारा ट्रेन मा केटी (२०१)) पाउला हकिन्स द्वारा। उल्लेख गरिएका पुस्तकहरू जस्तै, को ठूलो स्क्रीन को लागी एक अनुकूलन मनोवैज्ञानिक (अधिकार सोनी द्वारा खरीद गरिएको छ)।
खैर, के हो घरेलु नाई?
यो एक छ अवधि सिक्का (धेरै स्रोत अनुसार) द्वारा २०१ Jul मा जुलिया क्रउच। यो यस रूपमा परिभाषित छ अपराध वा रहस्य कथा का एक रूप, जसमा यसको मुख्य पात्रहरू "गृह अन्वेषकहरू" वा "आकस्मिक जासूसहरू" हुन्। यद्यपि यो आज प्रचलनमा रहेको सबजेनर हो, वास्तवमा यसलाई अगाथा क्रिस्टी वा स्टीफन किंग जस्ता लेखकहरूले व्यापक रूपमा प्रयोग गरेका थिए।
तर्क र सारांश मनोवैज्ञानिक
साराका श्रीमान्‌ सिगुर्दले उनलाई एउटा अडियो नोट छोडिदिए एउटा देशको केबिनमा पुगेपछि जहाँ उनी एक सप्ताहन्तमा बिदा गर्न लागेका थिए।। उसले त्यहाँ केहि साथीहरूलाई भेट्नेवाला छ, तर ती मध्ये कुनै पनिले उनलाई देखेको छैन र तिनीहरूले सारालाई स्थितिबारे चेतावनी दिने निर्णय गरे।
त्यसो भए, प्रश्नहरू हावामा उड्न थाल्छन्, विशेष गरी भ्वाइस सन्देशसँग सम्बन्धित। "किन तपाई आउँनुहुन्न?" दिमागमा लगातार प्रश्न रहेको छ सारा। अन्ततः, पुलिसले उनलाई सिगर्ड बेपत्ता पार्नेमा प्रमुख संदिग्धको रूपमा वर्गीकृत गर्‍यो जबकि उनी आफ्नो पति झूट बोलेको विश्वास गर्छिन्।
जसै उनको श्रीमान बेपत्ता हुनुको मामला बढ्दै जान्छ, साराको परामर्श पनि विकसित हुन्छन्। त्यहाँ, मुख्य पात्र चिन्ता, उदासिनता र आत्मसम्मान विकारहरूको साथ मानिस (किशोरहरू, मुख्यतया) मा उपचार र लागू गर्दछ। सम्म, कार्यालय एउटा अर्को चरित्र हो, किनकि त्यहाँ उपस्थित वस्तुहरूको प्रबन्ध महत्त्वपूर्ण हुन्छ मनोवैज्ञानिकको सम्झना को लागी।
पछि, जब सिगुर्ड मृत अवस्थामा देखा पर्दछ, साराको सबैभन्दा ठूलो डर मुक्त हुन्छ। त्यो क्षणमा, डाक्टर आफ्नै ज्ञान द्वारा सताइन्छ। किनभने दिमागले आफ्नो सुरक्षाको रूपको रूपमा झूट प्रयोग गर्ने तरीकाबाट उनी परिचित छन् ... यदि त्यहाँ एक धेरै सुरक्षित गोप्य छ भने, यो यसलाई उजागरको नतिजाको कारणले हो।
सम्झनाहरु द्वारा बौलाहा
जब घटनाहरू नजिक जान्छन्, साराको अविश्वास क्रमिक रूपमा अस्वस्थ तहसम्म बढ्छ।। नतिजाको रूपमा, उनी आफ्ना बिरामीहरू, उनको श्रीमानको शब्दहरू र सबैभन्दा खराब कुरा, उनको सम्झनाहरु बारे असुरक्षित महसुस गर्छिन् ... गहिरो कम, सारालाई थाहा छ कि मेमोरी झूटले भर्न सक्दछ कि त्यो असंगत मान्दछन्।
मनोवैज्ञानिक यो एक छ कालो उपन्यास धेरै घरेलु कारावासको समयलाई ध्यानमा राख्दै बाट संसारका धेरै देशहरूमा अनुभवी 2020। यद्यपि यो कुरा याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि पुस्तक त्यो वर्ष प्रकाशित भएको थियो भने पनि स्वास्थ्य अवस्था ट्रिगर हुनु भन्दा पहिले यसको प्रक्षेपण भयो।
पुस्तकको मुख्य पात्र, र हेलेन फ्लडको बीचमा समानताहरू धेरै स्पष्ट छन् (दुबै मनोवैज्ञानिकहरू हुन्)। थप रूपमा, पहिलो व्यक्तिको कथन र यसका अन्वेषण गरिएका विषयहरूको वैज्ञानिक निपुणताले उक्त प्रभावलाई अझ सुदृढ पार्न योगदान गर्दछ। यसबाहेक, यस्तो देखिन्छ कि वर्णन गरिएको घटनाहरू प्रत्यक्ष रूपमा लेखकको वास्तविक अनुभवसँग मेल खान्छ।
त्यो वास्तविक हो?
साराले अनुभव गरेको नाटक प्रकृतिमा पूर्ण रूपमा काल्पनिक भए पनि, हेलेन फ्लडले व्यापक रूपमा अध्ययन गरेको वैज्ञानिक आधार छ। साधारणतया डाक्टरले निरपेक्ष अविश्वासको भावनामा पाठकको कुर्सी समाप्त भयो, जायज? कारण: विज्ञानले दर्दनाक परिस्थितिमा मानव मेमोरी कती नाजुक छ भनेर देखाएको छ।
यस सन्दर्भमा, बाढीका लागि एक अन्तर्वार्तामा भनिएको छ एल पेरिडिको (२०२०): "कहिलेकाँही हामी स्मृतिको बारेमा धेरै निश्चित हुन्छौं तर यसको मतलब यो साँचो होइन भनेको होइनहामी प्राय: यसलाई हाम्रो इतिहासलाई सान्दर्भिक बनाउन पुन: संरचना गर्दछौं, र हाम्रो मेमोरीले सजिलै मिल्दछ जुन यसको विरोधाभास हुन्छ। यो स्पष्ट छैन कि हामीले हाम्रो मेमोरीमा विश्वास गर्नुपर्दछ "।
एक कथा धागा को रूप मा झूट
बाढीले एउटा साधारण गद्य प्रयोग गर्दछ जसमा अन्तर्बिल्ती संवाद र समयमा केहि जम्पहरू छन्। एनालेप्सिसले भनेflashbacks) सिगुर्डको सम्झनाहरू हुन् (जब उनीहरू भेटे, उनीहरूको सम्बन्धको विकास र हालको क्रममा उनीहरूको विकास)। हो, उपन्यासको विशिष्ट स्पर्श पात्रहरूको मनोवैज्ञानिक चित्रहरूको विस्तृत अन्वेषण हो।
त्यस बिन्दुमा, झूट भनेको तत्व हो जुन प्रायः लेखकलाई सबैभन्दा मनमोहक बनाउँछजो वैज्ञानिक रूपमा आफ्नो भनाइलाई निम्न वाक्यांशको साथ समर्थन गर्दछन्: “झूट बोल्ने धेरै तरिकाहरू छन्, सेतो झूट, आफूलाई खराब वा भ्रष्ट गरेकोमा आफ्नो सुरक्षाको लागि झूट बोल्नु, आत्म-छक्याइ, राम्रो मनसाय भएको ठानिएको कुराको लागि झूट बोल्नु। जब वास्तवमा यसले धेरै क्षति गरिरहेको हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » मनोवैज्ञानिक पुस्तक
ब्लान्का Valera। उनको मृत्युको वार्षिकी। कविताहरु